Guddoomiyaha Baarlamaanka SL oo ka codsaday Dawladda Norway inay ka kabto xagga miisaaniyadda Dawladda SL | WWW.SOMALILAND.NO
Guddoomiyaha Baarlamaanka SL oo ka codsaday Dawladda Norway inay ka kabto xagga miisaaniyadda Dawladda SL
Posted by: Abdirisak Isman Fadal
Waxa xalay iyo maanta (18/01/08) ka soo kala gegida diyaaradaha ee Oslo (Gardamoen), Gudd. Barlamaanka Jamhuuriyadda SL iyo Gudd. Xisbigga UCID, Muddane C/Raxmaan Max´ed C/laahi iyo Eng. Faysal Cali Waraabe. Waxaana halkaa ku soo dhaweeyey Jaaliyadda SL ee Norway oo uu horkacayaan Safiirka iyo Gudida jaaliyaddu. Weftigu isla maantaba wuxuu kulamo la qaatay saraakiil sar-sare oo ka tirsan Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Norway iyo Hay´adda mucaawinada dawliga ah ee NORAD. Waxa weftiga ku weheliyey labada guddomiye Safiirka SL ee Norway mudane Maxamed Adan Liilan.
Gudd. Ciro oo ku bilaabay kulankaa in Doorashooyinka soo socdaa ay noqon doonaan kuwo ka fiican kuwii hore, muujinna doonaan u bislaanshaha dimuqraadiyadda ee dalkayga iyo dadkeyga. Waxanu isla ogolaanay xilliga la qabanayo doorashooyinkaas, waxaanan codsanayaa inay sida ugu dhakhso badan ay u fusho balan qaadkii deeq bixiyeyaasha ee diiwaangelinta dadka codka bixinaya. Si doorashadu wakhtigeedii ugu qabsoonto. Mudane Cabdiraxmaan wuxuu ka codsaday Dawladda Norway inay u soo dirto khubaro (observers) doorashada soo socota dusha kala socda, isla markaana ay ka soo kordhiso tiradii ay u soo dirtay doorashooyinkii hore. Guddoomiyuhu wuxu dawladda norway toos uga codsaday sidii ay uga kabi laheyd miisaaniyadda dawladda JSL iyo inay deeqaha ay bixinayaan si toos ah u siiyaan dawladda. Waayo deeqdan soo mareysa Hay´aduhu toos uma wada gaadho dadkii u baahnaa iyo goobihii looga baahnaaba. Wuxu kaloo mudane Ciro ka codsaday masuuliyiintaa caawimo ay u fidiyaan xafiiska ka wakiilka SL ee Norway sidii uu si habsami ah ugu gudan lahaa shaqada xidhiidhinta labada dal.
Guddoomiyaha Xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe oo isna shirkaa ka hadlay ayaa madaxdaa uga waramay xaaladda goboladda bari iyo colaada ka taagan koonfurta Soomaaliya. Mudane Faysal mar uu ka hadlayey xaalada gobolada bari wuxu sheegay in khilaafkii maamul ee goboladaasi dhamaaday. Dawladduna ay imika xoogga saarayso dib u dhiska goboladaa. Isagoo ka waramaya waxa Soomaaliya ka taagan wuxu guddoomiyuhu u sheegay madaxdaa in xaaladeeda nabadgelyo ay ka wanaagsaneyd shan sanno horteed, doorashadii C/laahi Yuusufna ay sababtay qaskan iyo fawdadan sii korodhay. Waxaanu ku sifeeyey C/laahi Yuusuf “Charles Tailor-ka” Soomaaliya.
Safiirka SL ee dalkan Norway mudane Maxamed Aadan Liilan ayaa isna madaxdii wasaaradda arimaha dibadda u mahadnaqay sida dawladoodu indhaha ugu hayso macdanta iyo batroolka hoos ceegaaga SL. Safiirku wuxu 17.01.08 ka qeyb galay siminaar ay ka qeyb galeen in ka badan afartan shirkadood oo noorweji ah, kana shaqeeya qodista iyo soo saarida shidaalka dunida. Siminaarkaa oo toos loogu casuumay safiirka waxa lagu gorfaynayey maadaama baahidii shidaal ee dunidu maalinba maalinta ka dambeysa ay soo kordhayso goobaha cusub ee laga soo saari karo shidaal, si loo daboolo baahidaa. Goobihii shirkaduhu ku soo bandhigeen siminaarkaa waxa ku jiray Geeska Afrika siiba SL.
Madaxdii ka socotay dhinaca dawladda Norway waxay kulankaa ka sheegeen in deeqda ay bixiyaan aanay ka yareyn ta SL ay siiyaan wadamada kale ee yurub. Isla markaana ay fahamsan yihiin duruufaha dhaqaale ee ka jira SL iyo dib u dhiska ay u baahan tahayba. shirkaasi wuxuu ku soo gabagaboobay is afgarad. Weftigu waxay la kulmi doonaan sabtida beri jaaliyadda SL ee ku dhaqan Oslo iyo Gobolada ku dhawdhaw.
« Wasiirka Beeraha iyo Jaaliyadda Narway weftigii uu hogaaminayey gudd. golaha wakiiladda oo shir la yeeshay jaaliyadda Norway Oslo »